भोजपुरमा घट्यो एउटा अनौठो घटना , घरभित्र राखिएको थियो, दुई जना भित्र आए र किन यस्तो गरेर गए ? – Ramailo Sandesh
भोजपुरमा घट्यो एउटा अनौठो घटना , घरभित्र राखिएको थियो, दुई जना भित्र आए र किन यस्तो गरेर गए ?
घरभित्र राखिएको मोटरसाइकल सुरक्षित रहने बिश्वास गरिन्छ । तर सबै अवस्थामा यस्तो नहुने रहेछ । भोजपुरमा यस्तै एक अनौठो घटना भएको छ । घभोजपुरमा घट्यो एउटा अनौठो घटना , घरभित्र राखिएको थियो, दुई जना भित्र आए र किन यस्तो गरेर गए ?
घरभित्र राखिएको मोटरसाइकल सुरक्षित रहने बिश्वास गरिन्छ । तर सबै अवस्थामा यस्तो नहुने रहेछ ।
भोजपुरमा यस्तै एक अनौठो घटना भएको छ । घरभित्रै राखिएको मोटरसाइकल एकाएक बल्न थालेपछि पहिले त सन्जु तामाङ अचम्ममा परे । तर जब घटनाबारे थाहा पाए, उनीहरुले प्रहरी नै बोलाउनु पर्यो ।
अहिले घरमा राखेको मोटरसाइकल आगजनी गर्ने दुईजना प्रक्राउ परेका छन् । भोजपुर नगरपालिका– ९ मा स्थानीय सन्जु तामाङको घरको आँगनमा राखेको ८४ प ५२१४ नम्बरको मोटरसाइकलमा आगजनी गर्ने ३३ वर्षीय लाक्पा शेर्पा र ३० वर्षीय पासाङ शेपालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले पक्राउ गरेको हो।
न शामा रहेका उनीहरु आगजनीपश्चात् फरार रहेकोमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेको उनीहरूलाई जिल्ला अदालत भोजपुरबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीको भनाइ छ ।
रभित्रै राखिएको मोटरसाइकल एकाएक बल्न थालेपछि पहिले त सन्जु तामाङ अचम्ममा परे । तर जब घटनाबारे थाहा पाए, उनीहरुले प्रहरी नै बोलाउनु पर्यो ।
रौतहटमा बाढीले दुई सय भन्दा बढी घर विस्थापित